Maxaan ku diidnay Farmaajo?? – Balcad.com Teyteyleey
Maxaan ku diidnay Farmaajo??
1) Waxaa uu balan qaaday in ciidamada AMISOM dalka ka baxayaan balse waxaa muuqata in la soo kordhinayo.
2) Balan qaadkii ahaa ruuxii qaraxa ku dhinta magtiisa dowlada ayaa bixineeysa.waa BEENOWDAY
3) Waxaa uu tagay Sacuudiga,Kenya,Imaaraadka,, Ethiopia Turkiga London intaba waxaa uu kala soo kulmay dadka uma sheegin balse waxuu noqday qabri qori Save big on your Duetact purchase and buy it for as low as 0.43 USD right now! Don’t waste another second! saar maahee qori ka qaad ma laha.
4) ) Dhismaha dowlada oo eey noqotay mid aanan dheelitirneeyn,wasiir walbana ma aanuu helin xirfadii uu yaqiin shaqadiisa.Tusaale.Wasiirka Arimaha dibada,Wasiirka Amniga,Wasiirka Korontada iyo wasiirka Kaluumeeysiga iyo wasiiro faro badan
5) Fudeeyd iyo indho laáan,waxuu balan qaaday in ruuxii soo sheega QARAX in uu 100.000 Dollar siin doono.BEENLOOW.
6) Weli Muqdisho dadka degan ee uu martida u yahay uma uusan sheegin waxa aay mudan doonaan,maqaamka Muqdisho xaqoodii xagee jiraa ?? yuuse ku maqan yahay ?????
7) Dalka gobol aan hoostagin maamul goboleed ma jiro ilaa G.Banaadir sabbabta maxeey tahay ??? Gobol canshuur bixiyaa ma jiro ilaa G.Banaadir sabbabta maxeey tahay ???.
8) Dowlada daqliga soo gala waxuu ka yimaadaa ugu badnaan G.Banaadir ,Golaha wasiirada iyo G.shacabka labada aqal waxeey dhex joogaan G.Banaadir hadana G.Banaadir waxaa hortaagan ayaga lama siisan karo kacdoon xoogan ayeey mudan yihiin shacabka G.Banaadir.
9) Xilka waa mid meerto ah,laakiin in qaabka wax loo bedalayo aanu aheeyn mid soo kordhin kara balse qofka fiican in la bedelo maaha.
10) Waxaa uu ku dooday Farmaajo in Xassan Sheekh uu socod badnaa diyaarado saarnaa,war maxaad kaga duwan tahay 3 bil ayaad mareeysaa 8 dulimaad.
11) Masuq-maasuq ayaad afka ku haysaan Farmaajo & Kheeysre suaasha mudan in leeysweeydiiyo ayaa ah,Farmaajo xilka Madaxweeyne Masuqii aad sameeysay ee Dr.Cabdi Ismaaciil sheegay raali gelin ka bixi sida aad ku timid ayaa foolxumo aheeyd mauqa aad ka hadleeysaan maxuu yahay,kheeyre waa taajir xaguu ka keenay lacagta inteesa uu ku bixiyay in Farmaajo noqdo madaxweeyne ???
Alow sahal umuuraha.
FAAHFAAHIN: Madaxa Xafiiska Xaquuqul Insaanka Qaramada Midoobey oo ka degay Garowe + Sawirro
Tallaalka Jadeecada oo ka bilowday Muqdishu iyo Afgooye
China pledges to support Somalia’s development
Maxamuud Axmed	 Sep 22, 2017
Somalia keen to cement ties with Pakistan in all fields: Ambassador…